Sida loo Cancel qorshaha kaydinta iCloud
Haddii aad haysato qalab cusub macruufka, haddii ay tahay iPad, iPhone, iPod ama Mac, aad si toos ah u heli doonaan lacag la'aan ah iCloud kaydinta 5GB. Kaydinta waxa loo isticmaali karaa in ay ku kaydiso waxyaabaha sida sawiro ka qalab, music, barnaamijyadooda, filimada, buugaagta, emails, iwm Haddii 5GB xorta ah kuma filna idiin ama aad u baahan tahay kaydinta dheeraad ah, ka dibna Apple leeyahay qorshe aad u. Wixii dhowr dollars, waxaad heli kartaa dheeraadka ah iCloud meel lagu kaydiyo si loo badbaadiyo macluumaadka aad.
Haddii aad horey u xidhid ah kaydinta iCloud iyo go'aan aad u joojisid Times, raac tallaabooyinka hoose.
Qaybta 1. Sidee to cancel qorshe lagu kaydiyo iCloud u iPhone, iPad iyo iPod
Marka la eego hoos ku qoran waa tallaabooyinka to cancel qorshaha kaydinta iCloud oo khusaysaa qalabka iPad, iPhone, iyo iPod.
Talaabada 1: fur app Settings ku qoran shaashada guriga iyo hoos u dhaqaaq goobaha iCloud.
Talaabada 2aad: In goobaha iCloud, ka jaftaa "Kaydinta".
Talaabada 3: In menu Kaydinta ah, ka jaftaa "Maamul Kaydinta".
Talaabada 4: Scroll si hoose iyo ka jaftaa "Qorshaha Kaydinta Change".
Talaabada 5: tuubada "Free" doorasho ka dibna tubbada Buy midig sare ee app.
Waxaad ku qortaa erayga sirta ah ID Apple inay si guul leh burin qorshaha. Tani waxay qaadan doontaa saamayn degdeg ah Times haatan uu dhaco.
Qaybta 2. Sidee to cancel qorshe lagu kaydiyo iCloud on Mac
Talaabada 1: Riix Apple menu oo taga si aad door bidayso System, ka dibna riix on iCloud
Talaabada 2: Riix Maamul ee geeska hoose ee saxda ah.
Talaabada 3: Riix Plan Change Kaydinta ee geeska kore ee midigta.
Talaabada 4: Riix "hoos Options ..." oo geli sirta ID Apple oo guji maareeyo.
Talaabada 5: Dooro qorshaha "Free" in ay si guul leh u baajiso qorshaha. Tani waxay qaadan doontaa saamayn degdeg ah Times haatan uu dhaco.
Talaabada 6: Riix qabtay.
Qaybta 3. Sida loo masixi / dhow account iCloud
Isticmaalka qalabka macruufka ah oo aan xisaab iCloud waa soo socota si ay wax aan macquul aheyn. Waxaa kuu wanaagsan inaad haysan qalab macruufka ah ka badan in ay leeyihiin mid ka mid ah iyo xisaabta iCloud ah ma leedahay. The account iCloud muhiim ah maadaama ay tahay hab lagu gurmad u warbixin-shaqsiyeedkaaga. Xitaa haddii aad gurmad aan sameeyo sawiro, videos ama music, awoodo gurmad aad xiriirada, xusuusinta, jadwalka, emails qoraalada iyo aad. Iyaga Backing kor u muhiim ah tan iyo markii aad iyaga ka heli kartaa xitaa haddii aad lumiso qalab aad oo ay qaataan boqolkiiba yar ee aad kaydinta iCloud. Waxaad si fudud u heli karaan ama soo celin aad xiriirada, emails iyo macluumaadka gaarka ah ee kale ee ay kaliya syncing qalab cusub la account iCloud ama gasho in iCloud midkood on Windows ama Mac.
Haddii sababo qaarkood mar dambe ma aad rabto in aad isticmaasho kaydinta iCloud aad marna masixi karin xisaabtaada iCloud. All inaad samayso waa in ay tirtirto account ka qalabka oo dhan iyo kala cadeeyo xogta lagu kaydiyaa account iCloud.
Waxyaabaha aad u baahan tahay in la sameeyo ka hor inta aad ku gabagabayso account iCloud
Tan iyo markii aad go'aansatey in ay xirto xisaabtaada iCloud, ugu horreeya oo dhan aad u baahan tahay si aad u hubiso in mid ka mid ahaa qalabka aad hadda lagu synced in aad xisaabta iCloud. Tani waa muhiim sababtoo ah xitaa waxaad ka dib markii ay tirtirto xisaabta iyo qalabka waxaa ka dibna syncing waa sida aad Waxba looma samayn.
Marka labaad, waxaad u baahan tahay in ay tirtirto xisaab-aad oo dhan ka qalabka oo dhan. Haddii aad isticmaasho iPhone, iPad ama Mac ah, waxaad u baahan tahay in ay tirtirto account iCloud ka dhan ah qalabka.
Ka dib markii la tirtiro xisaabtaada ka aaladaha aad, aad u baahan doontaa inaad gasho in iCloud.com on your computer iyo tirtirto soo socda:
Photos: Haddii aad u ogolaato qalab aad u geliyaan sawiro aad u iCloud ka dibna aad si xaqiiqo ah u leeyihiin in ay hubiso xisaabta iyadoo la isticmaalayo internetka biraawsarkaaga iyo tirtirto oo dhan sawirada ku kaydsan server iCloud ah. Tani waxay sida caadiga ah syncs la qalab aad iyo tan iyo markaad ila saaro account ka qalab aad, waxaa mar dambe u hagaagsan.
Videos: Delete oo dhan videos ee uploaded in server iCloud ka qalab aad ka web iCloud in ay si buuxda uga takhalusi waxaa ka mid ah ku server.
Music: Dadka intooda badan u hagaagsan ay music la Xisaabtooda iCloud. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad sida ugu wanaagsan u tirtirto.
Dhammaan xiriirada aad: Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee telefoon in meesha ugu horeysa waa xiriirada. ICloud dukaamada dhan xiriirada ee qalab aad iyo aad u baahan tahay si ay u tirtirto tan iyo aad ayaa ku dhow inay xisaabta.
Kalandarada: Waxaad sidoo kale u baahan tahay in ay tirtirto jadwalka entries aad ka server.
Notes: qoraalada laga qalabka aad sidoo kale leedahay in la tirtiro si ay u sameeyaan habkan guul.
Xasuusin: Haddii aad tahay nooca isticmaala xusuusinta waqtiga oo dhan, ka dibna u qaadan waan idin ​​aqaan in xusuusinta ayaa waxaa sidoo kale uploaded in server iCloud ah.
Mail: Tani waxay sidoo kale waa mid ka mid ah sababaha muhiimka ah ee aad heshay telefoonka in meesha ugu horeysa iyo nadiifinta mail ee iCloud waa mid aad u muhiim ah tan iyo markii uu ka kooban yahay macluumaad badan oo shakhsi ah.
Ka dib markii tirtiro wax walba oo ka xisaabtaada iCloud, mar dambe ma aad awood u yeelan doonaan in ay helaan gurmad iCloud ee qalab aad marka laga reebo haddii aad iyaga xoojiyaa isticmaalaya Lugood. Taas macnaheedu waxa weeye ma dib u qalab aad iyo marka uu la dhacay ama lumo, ka dibna xogta oo dhan sidoo kale tegi doonaa.
Si aad u tirtirto account iCloud
Ka aaladaha aad takhalusid iCloud waa talaabada ugu horeysa ee aad ku gabagabayso account iCloud. In sidaa la yeelo, raac tallaabooyinka hoose.
Talaabada 1: fur app Settings ka screen Home iyo hoos u dhaqaaq goobaha iCloud.
Talaabada 2: Scroll si hoose ee page iCloud iyo tubbada Delete Account.
Talaabada 3: Tubada fursad u tirtirto furmo pop up si loo xaqiijiyo iCloud account tirtirka.
Sidee si ay u gudbiyaan music ka iPhone iCloud
Guide Full in aad bedesho ID iCloud Account ku jiraan / Email / Password / Username
Top 8 Tools iCloud tallaabsato
Maareynta Multiple Apple Qalabka la ID Apple Mid ka mid ah Family No dheer Nightmar yahay
Waxa Aad Sameyn Karto la Arrimaha iCloud on iPhone
> Resource > iCloud > Sida loo Cancel qorshaha kaydinta iCloud